China Ọbịbịa ọhụrụ-Aluminom butere ìhè ala yana nnukwu akụkụ nke onye nrụpụta na onye na-ebunye ya Ọrụ Ọkụ
Mgbasa Akwụkwọ Ahụ
Kọmpat Fluorescent Light
Elu Mount Light
Ọbịbịa ọhụụ-Aluminom butere akụkụ dị elu nke mbara ala
RO.LIGHTING CO., LTD. na-etinye mgbalị na-akparaghị ókè na nyocha na mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ. Ikanamịn ube LEDlọ na-agbanye n’ọkụ, ịgbanyụ ọkụ, ọkụ azụmaahịa bụ ngwaahịa anyị mepụtara n’oge na-adịbeghị anya ma resị ya ndị ahịa ụwa.
Ihe eji eme elu
Anyị na-eji ngwa eji eme gburugburu ebe obibi nwere ezigbo ngwaọrụ eji rụpụta alịmumịnụ ala na-enwu, na-enye ọkụ, ọkụ azụmaahịa. Ya mere, ọ dị oke mma na arụmọrụ kwụsiri ike ma dịkwa mma maka ndị ọrụ. Na mgbakwunye, a na-ejikarị ya site na nhazi pụrụ iche, akụkụ bekee sara mbara, nke a ma ama ma baa uru, ịdị mfe nke nrụnye., Na-eme ka ọ baa uru n'ọtụtụ ebe na ihe bara uru.
Banyere Ngwa Ya Nwere Oke
Tupu iwebata ngwaahịa ọhụrụ anyị - nke butere aluminom gbadata n’ọkụ, ịgbada ọkụ n’ahịa, ndị ọrụ nka anyị emeela ọtụtụ nnwale ma gosipụta uru ọ bara n’ubi dị iche iche. Dabere na nsonaazụ nnwale ahụ, enwere ike itinye ya n'ọrụ n'ọhịa (s) nke ụlọ nkwari akụ dị elu, ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, nnukwu ụlọ ahịa, ọfịs, ụlọ na ihe ndị ọzọ. Anyị kwenyere na ka ihe ndị a ma ama na-abawanye, a ga-achọpụta uru ya zoro ezo.
Elydabere na teknụzụ dị elu, ikike mmepụta kachasị mma, yana ọrụ zuru oke, Pro.Lighting na -ebute ụzọ na ụlọ ọrụ ugbu a ma na-agbasa ngwaahịa anyị n'ụwa niile. Tinyere ngwaahịa anyị, a na-enyekwa ọrụ anyị ka ọ bụrụ ọkwa kacha elu. Anyị na-enye ndị ọkachamara ahịa na ịza ajụjụ maka ịre ahịa na mgbe azụchara ahia, na-emeri ntụkwasị obi na otuto nke ndị ahịa. Anyị ehiwela otu ọkachamara na-azụ ahịa azụmaahịa dị njikere ịza ajụjụ niile gbasara ngwaahịa na ajụjụ anyị.
Oge nzipu ozi: Jul-14-2020
Ọbịbịa ọhụụ-Aluminom duuru ụzọ were were w ...
Raba megide oge! Pro.Lighting has res…
Led Spot, Spot Lighting, Modern Pendant Light , Chakwasa ihie , Ìhè ntụpọ, Cob Spot Light,